စားတော်ပွဲ ( Seafood & Rakhine Cuisine)
O Sushi Japanese Restaurant
Mr.Jerry Thai BBQ and Hotpot Yangon
အောင်ချမ်းသာ ( စားသောက်ဆိုင်)
Adeal International Myanmar Comapany Limited
Century Links Software Service
10% Discount For On Total Bill
10% Discount For On Total Bill အသေးစိတ်
ပရိုမိုးရှင်း TOM N TOMS Coffee Myanmar
မကြာသေးမီကပဲ ကော်ဖီချစ်သူများကြား တစ်ဟုန်ထိုး ရေပန်းစားလာသလို ကိုရီးယား Brand တစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့ TOM N TOMS Coffee မှာလည်း B&F Clubcard နဲ့ဆို 10% Off On Total Bill တဲ့နော်…
TOM N TOMS Coffee ဆိုင်က ဆိုင်အပြင်အဆင်လည်း မိုက်သလို Korea Brand Coffee ဆိုတော့ လူငယ်တွေ တော်တော်များများ အကြိုက်တွေ့နေတဲ့ဆိုင်ပါ… ပထမဆိုင်က လေဆိပ်မှာ စဖွင့်ထားပြီး အခုဆို ၀န်ကြီးများရုံး၊ ကန်သာယာ နဲ့ ရန်ကင်း ဆိုင်ခွဲတွေ တော်တော်များလာတယ်ဆိုတော့ တကူးတကာသွားစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ …
TOM N TOMS ဒီဆိုင်လေးမှာ ရနိုင်တဲ့ Menu တွေကတော့ တခြားဆိုင်တွေမှာ ရနိုင်တဲ့ Menu တွေနဲ့ လုံး၀ လုံး၀ ကိုမတူပါဘူး … ဆိုင်စရောက်တာနဲ့ Coffee နဲ့ Bread အနံ့တွေ မွှေးပျံ့နေတာက ဆွဲဆောင်မှု တစ်ခုလို့ပြောရမလား?
ပုံမှန်ရနိုင်တဲ့ Coffee အမျိုးအစားတွေသောက်ရတာ ငြီးငွေ့နေတဲ့ သူတွေသာမကပဲ Drinks လေးသောက်ရင်း Date ရတာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အတွဲတွေလိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ သူငယ်ချင်းအဖွဲ့လိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဆိမ့်သက်တဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်ရင်း စာအုပ်ကောင်းကောင်းလေးဖတ်ရင်း လောကကြီးနဲ့ ခေတ္တ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် နေရာထိုင်ခင်းကောင်းကောင်း ၊ စုံလင်လှတဲ့ ကော်ဖီ အမျိုးအစားတွေ နဲ့ Drinks တွေကြောင့် TOM N TOMS ကတော့ သွားလို့ကောင်းတဲ့ ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့...
ဒီလိုဆိုင်မှာ ဘယ်မှာမှ မရနိုင်တဲ့ B&F Weekly Promotions ရဲ့ Mobile App နဲ့ အသုံးပြုသူတွေသာ ရရှိမယ့် အထူးပရိုမိုးရှင်းကလည်း ရှိသေးတာနော် … Mobile App နဲ့အသုံးပြုသူတွေကတော့ Mobile App ထဲက “ Use Now” ခလုတ်လေးနှိတ်ပြီးကျလာတဲ့ “ Success” စာမျက်နှာလေးကို ပြသပြီးတော့ Total Bill မှာ 10% Off ပရိုမိုးရှင်း ရယူနိုင်ပါတယ်..
TOM T TOMS Address
Branch (1) – Kantharyar Shopping Center
Branch (2) – Time City
Phone Number - 09 790 728359
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကလည်း B&F Weekly Promotions ဖုန်းနံပါတ် 099 69910115, 099 69910128 ကိုရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်…
Promotions Period - 01. Feb .2020 - 31. July . 2020
TOM N TOMS Coffee Myanmar ဆိုင်
ဖုန်းနံပါတ် : 09 790 728359
Ends Monday, August 31, 2020